Didim-pitsarana Manatantara Mampanatrika An’i Brezila Ny Laza Ratsiny Fahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2014 16:19 GMT
Depiote Rubens Paiva miaraka amin'ny vadiny, Eunice. Sary avy amin'ny Sao Paulo Legislative Assembly
[Amin'ny teny portiogey avokoa ny rohy rehetra ankoatra izay nomarihana manokana.]
Manamboninahitra misotro ronono breziliana dimy no natsangana ho tompon'andraikitra tamin'ny fampijaliana sy famonoana ho faty ny solombavambahoaka Rubens paiva [en] tamin'ny 1971, nandritra ny fitondrana miaramila teo amin'ny firenena. tamin'ny 26 may 2014 , izay noeritreretina ho didim-pitsarana manatantara , dia nanaiky ity tranga fanenjehana ireo manam-boninahitra misotro ronono ireo ity, ny lapan'ny fitsarana federaly ho lalana manokatra indray ny toko matroka amin'ny tantaran'i Brezila.
Nilaza ny kolonely misotro ronono Paulo Malhães tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity fa natahotra ny amin'ny ainy. Iray volana taty aoriana, nisy namono tao an-tranony i Malhaes [en] ka natao tanatin'ny sarintsarina fandrobana tao an-tokantranony, tranga izay mbola hadihadiana hatramin'izao fotoana izao. Ny porofo vaovao hita tao an-tranony, toy ny antontan-taratasy mirakitra ny fandraisana anjaran'ireo manam-boninahitra dimy voalaza etsy ambony,dia nampiasain'ny biraon'ny fampanoavana hananganana raharaha hiampangana azy ireo.
Sambany ny didim-pitsarana tahhaka izao. Minisitry ny zon'olombelona telo aloha, Maria do Rosario, ni-tweet:
Kitro ifaharan'ny tantaran'ny demokrasian'ny firenena, fanamelohana ireo manam-boninahitra noho ny fampijaliana , ny tsy nahitana tampoka sy ny fahafatesan'i Rubens Paiva.
Mandritra izany fotoana izany ny blaogera avy amin'ny elatra-havanana Reinaldo Azevedo fa ilay didim-pitsarana; navoakan'ny mpitsara dia ‘hafa indrindra tamin'izay hitany hatramin'izay‘. Ny lalana momba ny famotsoran-keloka teo amin'ny firenena ,izay nadika ho fiarovana ireo mpikamban'ny mpanao didy jadona amin'ny fanenjehana, dia mbola manankery hatrany. Noho izany, araka ny fijerin'i Azevedo, na tsy mbola nahazo fahazoan-dalana hampijaly sy hamono ho faty aza ny fitondrana miaramila hatramin'izay (indrindra raha olona toa an'io solombavambahoaka io, izay tsy “mpampihorohoro”), dia mety tsy hanandanja araka ny tokony ho izy ny fanamelohana amin'izao fotoana izao.
Nanapa-kevitra ny mpitsara Caio Márcio Gutterres Taranto, na izany aza, fa ny fanamelohana ireto manam-boninahitra dimy ireto dia amin'ny lafiny maha-heloka bevava azy fa tsy amin'ny maha-heloka politika azy. Noho izany , ireo mpiaro dia tsy afaka mialokaloka ao ambanin'ny elon'ny Famotsoran-keoka eo amin'ny firenena.
Mbola afaka mampakatra ny fitsarana ihany anefa ireo voampanga .
Tafiditra ao anatin'ny tokon'ny tantaran'i Brezila mila ankalazaina ny didim-pitsarana nivoaka farany, miaraka amin'ny fanonerana ny taom-pahanginana maizina tamin’ ny fitondrana jadona. Hatramin'ny nijoroan'ny Vaomieram-Pirenena misahana ny Fahamarinana tamin'ny 2012, dia niatrika ireo tantaran'ny lasany izay tsy azo noresahina ny firenena. Nahita ny fisian'ny toerana fampijaliana olona an-tsokosoko miisa17 tamin'izany fotoana izany;teo amin'ny firenena ny tatitra savaranonando.
Iray amin'ny tranga tena mampiseho fahasahiana ity tantaran'i Ruben Paiva ity. Voatery nandao ny toerany amin'ny maha-depioten’ny antokon'ny mpiasa breziliana azy tao izy tao Sao Paulo izy taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tamin'ny 1964.
Talohan'io fanonganam-panjakana io i Paiva dia mpikambana tao amin'ny komitympanadihady natsangana hamotopototra ny ny asan'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana roa – Ivotoerana ho amin'ny fikarohana sy fandalinana ara-tsosialy (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais ) sy ny Ivotoerana Breziliana momba ny Katroka Demokratika (Instituto Brasileiro de Ação Democrática).Hitan'io komity io fa nanolikoly ireo miaramila manamboninahitra amin'ny resaka tahirinkevitra ireto fikambanana roa ireto, io tahirinkevitra io no nampiasaina hanentanana ny fisian'ny “fandrahonan'ny mena’- ho fampitahorana fa ho lasan'ny komonista i Brezila. Nampiasaina avy eo ny vola hanohanana ny fanonganam-panjakana ara-miaramila.
Taorian'ny nanaovany sesintany tany Chile, dia niverina tany Brezila i Paiva tamin'ny taona 1971 ary nosamborin'ny polisy tao an-tranony tany Rio de J eiro. Taorian'izany no nanjavonany ka na nisy aza ny fanambarana ofisialy fa nisy naka an-keriny izy nandritra ny fotoana nitazonana azy vonjimaika, dia efa niely ny ahahy fa novonoina izy. Efa mihamazava ankehitriny fa rehefa avy nampijaliana izy dia novonoina tamin-kerisetra, ary nesorina ny nifiny sy ny rantsatanany mba tsy hisy hahafantarana azy intsony [en].
Mbola lavitra ny lalana hodiavina
Taorian'ny fahafatesan'i Paiva, dia tombanana ihany koa fa mety averina hotsaraina ny habibiana tao amin'ny Valam-pirenena Foz do Iguaçu. Fantatra amin'ny hoe “Habibiana tao An-Jaridaina” ny tantara izay niafara tamin’ ny fahafatesan'ny Breziliana mpikatroka politika enina- dimy Breziliana ary iray Arzantiniana – saingy tsy mety hita ny sisan'izy ireo. Efa eo ampanadihadianany raharaha moa ankehitriny ny fikambanana akademika sy ny Vaomieram-Pirenena misahana ny Fahamarinana mba hahitana ny marina amin'ny raharaha sy hamantarana ny meloka, dia toy izay no fizorana amin'ny fanakatonana ny zavamiafin'ny fahafatesana sy ny fanjavonan'ny mpikatroka politika.
Na dia misy aza ny dingana maro vitan'ny Vaomieram-Pirenena Misahana ny Marina, dia mbola maro ireo tokony hofongarina amin'ny tantaran'ny fitondrana jadona tany Brezila. Nitaky ny mpanao gazety Juliana Dal Piva nandritra ny fotoam-pivorian'ny Vaomiera fa mba hipongaran'ny marina, dia mbola mila manohy ny tolona hahazoana fampafantarana avy amin'ny hery mitam-piadiana ireo rehetra miasa ho amin'ny famoahana ny marina, tahaka ny mpanangom-baovao, ny vaomiera ary eny fa na dia ny biraon'ny fampanoavana aza.
Hanamarika ny fiantombohan'ny tena fiovana angamba ny fanamelohana ny sasany amin'ireo mpampijaly tao amin'ny fitondrana miaramila.
Raha toa ka voaheloka ny roa amin'ireo manamboninahitra dimy voampanga any amin'ny fitsarana , dia mety ho voasazy 37 taona an-tranomaizina noho ny vono-olona, ary sazy 10 taona an-tranomaizina kosa ho an’ ireo telo hafa noho ny hosoka natao tany amin'ny fitsarana , firaisana tsikombakomba amin'ny famonoana olona mitam-piadiana sy heloka noho ny fanafenana fatin'olona.